टुंगो लाग्यो लर्ड वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बन्ने स्थान, धुर्मुसको प्रस्ताव मन्त्रालयमा… – पुरा पढ्नुहोस्……
टुंगो लाग्यो लर्ड वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बन्ने स्थान, धुर्मुसको प्रस्ताव मन्त्रालयमा…
७ वैशाख, काठमाडौं । धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले अन्ततः क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ललितपुरको गोदावरीमा रहेको जग्गा फाइनल गरेको छ । सबै हिसाबले सो जग्गा उपयुक्त देखिएको भन्दै फाउन्डेसनको प्राविधिक टोलीका तर्फबाट खेलकुद मन्त्रालयमा औपचारिक प्रस्तावना पेश गरिएको छ । प्राविधिक विशेषज्ञसहितको धुर्मुसको टिमले देशका विभिन्न स्थानहरुमा प्रस्तावित जग्गाको अवलोकन र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर निर्णय लिएको हो ।
टिमले काठमाडौंको कीर्तिपुर, मूलपानी, चोभार तथा पोखरा, चितवन, भैरहवालगायतका स्थानहरुमा रहेका सरकारी जग्गाको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । गोदावरीस्थित १ सय २८ रोपनी जग्गा अहिलेसम्म हेरिएकामध्ये उत्कृष्ट रहेको धुर्मुसको प्राविधिक टिमले ठहर गरेको छ । मनोरम स्थानमा रहेको हुनाले पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
यो जग्गा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा रहेको बुझिएको छ । त्यहाँ पहिले मत्स्यपालन गरिएको पोखरी भूईंचालोपछि सुकेकाले प्रयोजनविहीन थियो । खेलकुद मन्त्रालयले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई सो जग्गा उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नुपर्छ । जग्गा उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको स्रोतले बतायो ।
‘जनचाहना अनुसार हामी ढिला गर्ने पक्षमा छैनौं, चाँडोभन्दा चाँडो यसमा निर्णय लिनेछौं,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने । सामाजिक क्षेत्रबाट खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा पहल हुनुलाई आफूले सकारात्मक भएको उनले बताए । ‘म एउटा युवा मन्त्री हुँ र खेलप्रेमी युवाहरुको भावना बुझ्छु,’ उनले भने, ‘त्यसैले मबाट आनाकानी र ढिलासुस्ती हुँदैन ।’
अनलाईन खबर डटकम बाट
Prevअन्तत रोशना ४७ दिन पछी घर फर्किएकी छिन, घर पुगेपछि उनीसग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस (भिडियो)
Nextगोदावारीमा बन्ने भयो ४० हजार क्षमता भएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रीकेट इस्टेडियम ! पुरा खबर हेर्नुहोस
को हुन यी यूवती ? पत्रकार रवी लामिछाने र पत्नी निकिता प्रति यति मायाँ स्क्रेच तस्बिर बोकेर भेट्न स्टुडियोमै पुगिन्….
पापीनीलाई खुसी राख्दा मलेसियामा खुट्टा गुम्यो, तै पनि छोडेर गई, ११ महिने छोराको यस्तो हालत…हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)